HomeWararka CiyaarahaMauro Icardi oo shaki laga muujiyay kulanka PSG Champions League-ga ee RB Leipzig
October 18, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Horyaalka France 0
Weeraryahanka Paris Saint-Germain Mauro Icardi ayaa lagu soo waramayaa inuu shaki ku jiro inuu ciyaari karo kulanka Champions League ee RB Leipzig xilli uu muuqdo khilaaf u dhexeeya xaaskiisa iyo wakiilkiisa Wanda Nara .
Weeraryahanka reer Argentine wuxuu guursaday Nara in ka badan toddobo sano, laakiin lammaanaha waxaa soo dhex-galay khilaaf.
Nara ayaa markii hore raacday Icardi waxayna soo dhigtay sheeko Instagram ah oo u turjumeysa: “Qoys kale oo aad u burburisay sl*t” ka hor inta uusan ninka PSG isku dayin inuu hoos u dhigo khilaafka isagoo soo dhigay qoraal lagu xusayo Maalinta Hooyada.
Si kastaba ha ahaatee, Nara ayaa sii ambaqaaday sheeko kale oo khilaafka sii hurisay L’Equipe ayaana hadda soo werisay in Icardi uu seegay tababarkii PSG ee Axaddii.
Warbixintu waxay sheegaysaa in Icardi iyo Nara – oo hore u haasaawi jiray saaxiibkii Icardi ee reer Argentina Maxi Lopez – ay hadda kala tageen. .
Icardi ayaa dhaliyay seddex gool 11 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan waxaana uu ciyaaray 90ka daqiiqo kulankii PSG 2-1 kaga badisay Angers habeenkii jimcaha.